Kama Qayb-galayno shir aan u daba fadhiisanayno Madaxweynaha Somalia”
Hargeysa, Wasiirka cusub ee Arrimaha dibadda Somaliland mudane Maxamed Biixi Yoonis, ayaa si rasmi ah ula wareegay xilkii shalay oo bisha July ahayd 27, 2013 isla markaana sheegay in weftigii midowga Yurub ee booqashada ku yimid Hargeysa ay u sheegeen in Somaliland iyo Soomaaliya laba dal kala yihiin isla markaana laba marxaladood oo kala duwan ku kala jiraan.
Sidaasna wuuxu ka sheegay xaflad uu maanta kula wareegayay xilka oo lagu qabtay Hargeysa, waxaana munaasabaddaas ka qayb-galay, wasiirro, xidlhibaanno, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda.
Safaaradda Somaliland ee UK waxay hambalyo iyo duco hawada u marineysaa dhammaan dadweynaha reer Somaliland ee Dalkii iyo daafaha dunida ku kala nool.
Ilaahay sannadka sannadkiisa guul, caafimaad iyo camal san ha innagu gaadhiiyo
By Mark Hay – VICE – At the back corner of the top floor of a little office building in London’s East End, around the corner from the Tesco down Mile End Road from the Whitechapel subway stop, sits the one-room Somaliland Mission in the UK.
Yes, Somaliland, not Somalia (as the pamphlets in the office make painfully clear). In 1991, right after the ouster of the Cold War-era military dictator of Somalia, Mohamed Siad Barre, and just before the descent of the country into 22-and-counting years of chaos and violence, the northern stretch of the nation softly declared its independence as the Republic of Somaliland.
Waxa maanta si ballaadhan loogu soo dhoweeyey caasimadda Somaliland ee Hargeysa Wasiirka Arrimaha Dibedda Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Biixi Yoonis oo maanta ka soo degey gegida diyaaradaha ee Egal International Airport. Wasiirka waxa halkaa ku soo dhoweeyey dadweyne kumanaan kor u dhaafay oo ay hor kacayaan raxan wasiirro ah oo ay kamid yihiin wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka duulista hawada, wasiirka tacliinta iyo wasiirro iyo madax kale oo tiro badan.
Halkan guji si aad u dhegeysato hadal kooban oo uu wasiirku jeediyey markii uu dalka yimid.
Addis-ababa, Raysal wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn, ayaa galabta xafiiskiisa ku qaabbilay Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Silanyo) oo maanta soo gaadhay magaalada Addis-ababa ee dalka itoobiya ka dib markii ay maalmihii la soo dhaafay ku sugnaayeen dalka Britain.
Kulankan oo socday muddo saacad iyo badh ah ayaa labada Hoggaamiye ku faaqideen sidii loo sii adkayn lahaa isla markaana kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dal ee Itoobiya iyo Somaliland.